"Ajaanibtu ma doortan iskuulada farsamaha gacanta" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
"Ajaanibtu ma doortan iskuulada farsamaha gacanta"
La daabacay tisdag 8 december 2015 kl 13.12
Dawladda ayaa maanta seminaar ay ururka SNS qabteen ku soo bandhigay dhowr qorshe oo ka hadlaya si ay dhalinyarada iskuulka sare ka baxaa shaqo u heli lahayeen mustaqbalka.
-Waxaanu doonayna in aan caruurta fasalada 8 ilaa 9:aad u dirno tabobar shaqo si ay u baartan si loo shaqeeysto, islamarkaas na ay waayo aragnimo u yeeshaan suuqa shaqada, ayey sheegtay Amelie von zweigbergk oo dawladda u qaabilsan si caruurta iskuulka sare ee gymnasiet ka baxdaa shaqo u heli lahaayeen.
Islamarkaas ayey Amelie ku tallinaysa in dhalinyarada dooratay iskuulada farsamada gacanta iskuulo u gaar ah xirfadahan wax lagu baro si ay horumar halkaas uga sameeyan inta aaney shaqo raadsan. Tan ayaa ah sidu qorshahu u muujinayo afar sbuuc sannad dugsiyyeed kasta .
Islamarkaas ayey u jeeda in ay iskuulada waxbarashadan haysta ku liitaan in ay caruurta baraan xaalada ka taagan suuqa shaqada iyo xirfadaha kala duwan ee halkaas ka jirta, islamarkaas na dhaleecayn xoog leh u gudbinayso hagida waxbarasha ee iskuuladan ka jirta.
Dhanka kale weli waxaa yar tirodii ajaanib ee markey heerka gymnasiet gaadhan doorta waxbarashada u gaarka ah xirfada kala duwaan, khaasatan hablaha ayey sheegtay.
Sababta oo ah in ay tusaalahan waalidka caruurtani farsamaha gacanta u haysan shaqo wanaagsan, ayey raacisay.
Amelie von zweigbergk ayaa Iswiidhan u barbardhigtay waddanka Finland, dhinaca maamulka iskuulka.
-Hagida waxbarashada iskuuladan ayaa ku liita xidhiidhka ay la leeyehiin caruurtan, wakhtigan ayaa ugu badnaan ah rubuc saaco, waa inta ay warqadaha buuxinayaan, halku xidhiidhkani Finland ka yahay mid qooto dheer leh oo mar kasta jira., ayey sheegtay.
Qorshahan ay maanta dawladdu soo saartay ayaa hadii u taageero helo la dhabeyn doona 2017 amba 2018.